Fanamboarana fiara - maninona ary amin'ny fomba ahoana? Tombony sy fatiantoka
Mpamily maro na ho ela na ho haingana dia mieritreritra momba ny vera miloko an'ny fiarany. Betsaka ny antony mahatonga an'io: ny faniriana hiafina amin'ny mason-koditra, ary ny fahaizana manao ny endrik'ilay soavaly vy misy fomban-drazana sy maoderina kokoa, ary ny fahaizana manala ny famirapiratry ny masoandro manelingelina ny fitondrana fiara, sy ny maro hafa.
Ny tombony lehibe amin'ity fomba fanamboarana fiara ity dia ny fahatsoran'ity asa ity sy ny vidiny kely dia kely. Raha ny tokony ho izy, tsara ny manamarika fa ny vidiny ambany dia tsy famantarana foana ny kalitaon'ny fitaovana sy ny asa ambany, fa mety noho ny fampiasana teknika tsotra kokoa amin'ny fampiharana ilay fitaovana.
Amin'ny ankapobeny, manaova karazana isan-karazany taratra fiara Androany dia azo atao izany, tsy amin'ny foibe serivisy lafo vidy ihany, fa avy amin'ireo mpivarotra tsy miankina izay mampihatra karazana asa toy izany mivantana ao amin'ny garaziny ihany koa.
Tombony sy fatiantoka ny fitaratra fitaratra fiara isaky ny karazana tinting dia misy lafiny tsara sy ratsy, koa eto dia hamaritana amin'ny fomba feno sy handinika ireo karazana sy toetra mampiavaka ny tinting isika. Tombony azo amin'ny fikandrana amin'ny fikandrana fiara. Io miampy io dia avy amin'ny faniriana hiafina amin'ny mason'ny maso.
Ny varavarankely miloko amin'ny fiara dia manampy amin'ny fijanonan'ny mpamily sy ny mpandeha ao anaty fiara. Ankoatr'izay, noho ny mampiavaka ny toning, dia esorina ny fiantraikan'ny tara-masoandro sy ny taratra ultraviolet mivantana, vokatr'izany, amin'ny vanim-potoana mafana, ny mari-pana amin'ny rivotra ao anaty fiara miloko dia hidina ambany kokoa noho ny ao anaty fiara. tsy misy tinting. Azo ampiharina.
Ny Tinting dia miaro tanteraka ireo akora anatiny raha tsy tara-pahazavana amin'ny masoandro, mba tsy ho maina ny fitaovana, tsy ho very ny lokony tany am-boalohany, noho izany, mamonjy vola amin'ny fanoloana fonony sns. Fiarovana ny zavatra (fiarovana azo antoka).
Tsy maro ny mpamily no mieritreritra fa matetika ny fiarovana ny zavatra ao anaty tranony dia miankina amin'ny lokon'ny fitaratry ny fiara: raha tsy hita avy any ivelany ny zavatra tsy am-piheverana tavela ao an-kabine, dia matetika kokoa no mipoitra ilay fakampanahy hanaraka azy ireo.
Ary na dia mandritra ny lozam-pifamoivoizana iray aza, ny vera miloko dia tsy mamaky sombin-javatra kely ary tsy manimba ny mpamily sy ny mpandeha izany. Ny fisehoan'ny fiara manintona kokoa. Matetika, karazana fikolokoloana isan-karazany dia apetraka tsara mba hahomby kokoa eo ivelany ny fiaranao, indrindra raha mampiasa fitaovana vita amin'ny alokaloka mamirapiratra ho an'ny loko ianao.
Ny tsy fahombiazan'ny fahitana. Io fihemorana io dia tsy miseho afa-tsy rehefa miloko, mba hametrahana azy moramora, be loatra: miaraka amin'ny vera mainty maizina, mihombo tsy azo ihodivirana ny fahitana, izay tsy mamela ny mpamily hanombatombana tsara ny zava-misy eny an-dalana. Ity fahantrana ity dia tsapa indrindra amin'ny alina, rehefa mitondra fiara amin'ny toe-javatra zavona, orana na amin'ny toetr'andro rahona. Ny rafitra mpanao lalàna.
Rehefa manapa-kevitra ny handoko ny varavarankelin'ny fiaranao ianao dia ilaina ny mandinika ny fepetra takian'ny polisy misahana ny fifamoivoizana amin'ity karazana fanamboarana fiara-mandeha ity: ankehitriny karazana karazan-tinting ihany no avela, misy ihany koa ny takiana manokana momba ny isan-jaton'ny fidirana hazavana azo ekena. . Ny tena karazana toning Spray toning. Miorina amin'ny fomba fiasa izay somary sarotra amin'ny lafiny teknolojia, antsoina hoe plasma na magnetron. Ity fomba ity dia matetika ampiasaina mandritra ny famokarana serial ny fiara nafarana. Ataovy ity loko sy ao an-trano ity, fa amin'ity tranga ity, ny kalitao, toy ny fitsipika, dia mamela zavatra maro irina.
Tombontsoa - fanoherana ny fahasimban'ny mekanika sy ny fahombiazany avo. Cons - lafo vidy, ny asa dia azo atao amin'ny alàlan'ny kalitao avo lenta ihany ao amin'ny ozinina, saingy tsy azo atao ny manafoana ny fikolokoloana toy izany. Fandokoana sarimihetsika. Misy karazany maro ny karazana horonantsary eny an-tsena, samy hafa ny lokony sy ny maizina ary ny mpanamboatra azy.
Amin'ny lafiny teknolojia, ny fametrahana sarimihetsika amin'ny vera dia tsy sarotra; miaraka amin'ny fahaiza-manao iray, dia azo atao tsy miankina izy io. Na izany aza, mbola tsara kokoa ny mitodika any amin'ireo manam-pahaizana izay tsy hametraka vidin-javatra mihoapampana ho an'ity karazana asa ity, ary miaraka amin'izay dia hanao ilay asa haingana sy mahomby. Tombontsoa - ny fahamoran'ny fametrahana azy, ny fahazoana, ny fahaizan'ny famongorana.
Maharatsy - mora simba izy io, azo atao ny misavoritaka mandritra ny fandidiana, mety hanodikodina ny sary tena izy koa izy io. Toning azo esorina. Izy io dia azo aseho na amin'ny endrika tontonana plastika, na vita amin'ny fototry ny sarimihetsika silicone. Tombontsoa - mora vidy, mora apetraka, afaka mandrava haingana. Maharatsy - maka toerana ilaina ao amin'ny fitoeran'ny entana ny fiara.
Fiovan'ny UAZ 3303. Fandefasana fiara an-trano
Ilay fitaovana maotera fiara. Famaritana, fitsipika fototry ny fandidiana
Tuning "Fandresena": fiainana vaovao ho an'ny fiara taloha
Posted in auto sy moto
Prev Hamitaka ve ireo andriamby fitahirizana solika?
Manaraka Kajy fananganana trano
81 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,854.